Xildhibaan Saado Cali Warsame oo Muqdisho lagu dilay
War deg deg ah oo naga soo gaaraya magalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhawayd koox hubaysani ay ku dishay degmada Hodan gaar ahaan xaafada Taleex Xildhibaan Saado Cali Warsame oo ka mid ah Xildhibaanadda baarlamaanka kasoo gala Puntland.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerarka Xildhibaan Saado lagu soo qaaday iyadoona goobjooge la hadlay Radio Garowe uu sheegayo inay dhimatay.
Gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa isla markiiba goobta yimi iyo ciidan aad u faro badan waxana loola cararay isbitaalka magalada Muqdisho.
Dadwayne aad u faro badan ayaa goobta u falkan ka dhacay isi soo buuxiyay kuwaasoo ka naxay Saado Cali Warsame weerarka lagu soo qaaday.
Saado Cali ayaa ka mid ahayd fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed ee Kooxda Waabari waxayna fanka soo gashay 1973.
Madaxweynaha Puntland oo la filayo inuu dib u magacaabo Wasiiradii kalsoonida lagala noqdey
Puntland 28.07.2017. 14:20
GAROWE, Puntland- Wararka warsidaha GO ka helayo ilo kalsoon yahay ayaa sheegaya in la filayo dhowaan in Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas dib u soo magacaabo inta badan gollihii wasiirada Puntland ee kalsoonida dhowaan ay kala noqdeen xildhibaana ...